China MG 3-4T/H Mfe Dry Mortar Production Line na-emepụta na ndị na-ebubata | MG
MG 3-4T/H Dị Mfe Akọrọ ngwa ngwa mmepụta Line
Ngwakọta MG Multi Spiral Ribbon Mixer, nke emebere na igwekota U-ọdịnala, bụ nhazi ngwakọta rịbọn oyi akwa atọ kachasị ọhụrụ. Osisi zuru oke na-agụnye otu ihe eji ebu nri nri, otu igwe na-agwakọta rịbọn, ebufe ihe nke abụọ, otu ngwaahịa hopper, otu igwe nkwakọ ngwaahịa valvụ, otu ntụ ntụ ikuku na njikwa njikwa izugbe. Nke a na osisi na-aghọta ihe nri, akpaka Ịgwakọta, ejuputa na nkwakọ ngwaahịa mmepụta usoro, na atụmatụ nke dị mfe na bara uru, mfe ọrụ na obere ego na-amalite azụmahịa.
Production output: 3-4T/H; Area occupation < 20 m2 ; Ogologo <3.5 mita; Onye ọrụ chọrọ: 2-3 mmadụ.
Ngwa mmepụta: Adhesive Tile, Wall Putty, Masonry Mortar, Gypsum ngwa agha ịgwakọta na mbukota
Ụdị Ngwakọta: Multi-Spiral Ribbon Mixer
Oge ngwakọta: 10-15min / ogbe
Igwe nkwakọ ngwaahịa Valve: 15-50KG/akpa mgbanwe
Oriri ike: 15-20KW/H
Ọrụ mpaghara: 6000*3000*3000m
Akwụkwọ ikike igwe: Ọnwa iri na abụọ
Ntinye igwe: Enyere vidiyo na akwụkwọ ntuziaka
Oge Mbuga ozi: 10-15 ụbọchị ọrụ
Voltaji & Ugboro: ahaziri
Nkọwa nke Osisi Mortar Dry dị Mfe
MGDM-3.0 A na-eji ahịrị mmepụta ngwa agha akọrọ dị mfe maka imepụta ngwa agha akọrọ na ikike nke 3-4t / h. Ahịrị imepụta ngwa agha akọrọ dị mfe dabere na echiche imewe kachasị ọhụrụ na Europe, njirimara ya na ọnụ ala dị ala, mpaghara ọrụ dị obere. Ọ na-agụnye otu igwekota rịbọn, ihe mkpuchi abụọ nke ịghasa, otu silo ngwaahịa emechara na otu igwe nkwakọ ngwaahịa akpaka, otu igwe ikuku, na otu kabinet njikwa. Mpaghara ejiri: 25-35㎡, elu: 3.2m.
Mba. Aha Nhazi Ọrụ
1 Kpọchie ebufe na hopper Dia: Φ165X3500mm Nri ihe na igwekota
2 Ngwakọta rịbọn oge ngwakọta: 10-15min / ogbe nweta edo Ịgwakọta mmetụta na dịtụ obere oge.
3 Screw conveyor 2 Dia: Φ165X3500mm Bufee ihe emechara ka ọ bụrụ ihe a rụchara site na igwekota
4 Kwụsị hopper ngwaahịa Olu: 1.5m³ Chekwaa ihe emechara ma kwadebe maka igwe nkwakọ ngwaahịa, nke na-eme ka arụmọrụ dịkwuo mma.
5 Igwe nkwakọ ngwaahịa Ụdị: Valve ụdị Rang: 15-50kg mgbanwe mbukota ọsọ: 5-6s / akpa. akpaka ndochi na nkwakọ ngwaahịa.
6 Igwe ntụtụ ikuku 0.12m³ itule ndị bụ nrụgide
7 Ụlọ ọrụ nchịkwa Nhazi zuru oke
Obere ego na kacha mma maka ndị mmadụ n'otu n'otu.
Obere akara ukwu, ụlọ ndị nkịtị nwere ike ịrụ ụlọ mmepụta ihe.
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, mmadụ 2-3 nwere ike ime ya. .
Mkpụrụ dị elu, mmepụta bụ 3-4T / H na-emekarị, iji ruo 20-25T kwa ụbọchị.
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na mmezi.
Ihe nkedo nke skru na-enye ihe na igwekota. The gburugburu ahụ imewe na obere dayameta, elu na-agbagharị ọsọ ọsọ na mgbanwe pitch na-eme ka ọ dị ire, ngwa ngwa na otu nri nke ngwaahịa na-arụ ọrụ usoro.
Mpụta na n'ime ịghasa rịbọn agụba chụpụrụ elu na-agbagharị aro aro, agwakọta ihe na kacha, nweta edo Ịgwakọta mmetụta. Oge ngwakọta: 10-15min / ogbe
Kwụsị hopper ngwaahịa
Ebe nchekwa silo bụ 1.5m³, chekwaa ihe emechara ma kwadebe maka igwe nkwakọ ngwaahịa, nke na-eme ka arụmọrụ ya dịkwuo mma.
Ụdị valvụ akpaka nkụ ngwa agha. 15-50kg / akpa mgbanwe, mbukota ọsọ bụ 5-6s / akpa. Ọsọ mbukota ngwa ngwa, nha nha dị elu, ogo akpaaka dị elu, yana ọrụ dị mfe.
Na kabinet na-achịkwa eletrik, nke dị mfe ịrụ ọrụ, dị mma maka ndị ọrụ na adaba iji chịkwaa ihe ọkụkụ dị mfe akọrọ.
Igwe ntụtụ ikuku
0.12m³, dozie nrụgide ikuku, nye ebe ikuku maka igwe nkwakọ ngwaahịa maka mbukota ngwa ngwa na agbaji agbaji nke hopper ngwaahịa.
1.How bụ àgwà ngwaahịa gị?
A: A na-arụpụta igwe anyị nke ọma dịka ụkpụrụ mba na nke mba ụwa si dị, anyị na-elele obere akụkụ ọ bụla tupu nnyefe
2.Kedu maka ọnụahịa ahụ?
A: Anyị na-ere ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma nwee ike ịnye gị ọnụahịa dị ala karịa ahịa, anyị nwere amụma nke ịchekwa oge na ime ihe n'eziokwu, anyị na-ehota dị ka o kwere mee maka onye ahịa ọ bụla ma nye ego dị ka ọnụọgụgụ.
3. Kedu akụrụngwa na ọrụ ị nwere ike inye?
A: Anyị nwere ike na-enye gị turnkey ngwọta nke akọrọ ngwa agha osisi si arụ ọrụ saịtị na-eme atụmatụ na akọrọ ngwa agha igwe, njem, echichi na ọzụzụ, usoro nke akọrọ ngwa agha, mgbe ahịa ọrụ, ndụ oge oru nkwado wdg.
4. Gịnị bụ ike nke akọrọ ngwa agha osisi gị?
A: Anyị nwere ikike ngwa agha akọrọ site na 3-30T / H dị ka ihe ị chọrọ, yana anyị nwekwara ike hazie igwe maka gị.
5. Ị nwere ike ịwụnye ihe ọkụkụ akọrọ na obodo m?
A: Ee, anyị ga-eziga ndị injinia na obodo gị maka ịduzi nrụnye na ịzụ ndị ọrụ gị ka ha rụọ ọrụ igwe.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu nke anyị akọrọ ngwa agha osisi, biko zitere anyị ajụjụ ma ọ bụ hapụ gị nọmba kọntaktị gị.
Osote: 6-8T/H Semi-akpaka akọrọ ngwa agha mmepụta akara
Ahịrị mmepụta nke Masonry Mortar Premixed
Ahịrị mmepụta ngwa agha pụrụ iche
4-5T/H emelitere Mfe Ejima Shafts Agravic Mixe...
6-8T/H Semi-akpaka akọrọ ngwa agha mmepụta akara
Zhengzhou MG Brand 15-20T/H zuru akpaka akpọnwụrụ ...
Ngwaahịa akpaka zuru oke
MG 10-12T/H zuru akpaka akọrọ ngwa ngwa ngwakọta Pl...